Marijuana mbeu inoteedzera | MyWeedSeeds.com
mbanje kukura vatungamiriri /
vatungamiriri vembanje mbanje
Mbeu yeMambanje guides
Mbeu yeMembanje kumera
Kuti ubudirire kumera kwembeu yembanje, varimi vanofanira kutevedzera vatatu vakuru vakuru. Mbeu dzinoda kudziya, rima uyezve, hunyoro hwakawanda. Mvura yakasvibiswa inobatsira kuwedzera zviwanikwa zvako mukuenzanisa nemvura kana mvura yepombi, asi hazvidiwe. Mvura zhinji yemasipareti ...
Kusarudza mbanje strain
Kune mibvunzo yakawanda inomuka kana uchitaura nezve mhodzi dzembanje. Unoziva here kuti ndeapi marudzi aunosarudza? Kana yako sarudzo yaunosanganisa yeanopfuura imwechete dzakasiyana? Ndeipi nzvimbo yakanaka yekukura, uye ndeipi nzvimbo iwe yauri kuzonyatsokwanisa kushandisa? Chii chako ...
Mbanje yekuchengetedza mbeu
Pane kusawirirana kwakawanda pamusoro pekuchengetera mbeu yembanje: nharaunda dzinotonhora semafriji kana anotonhorera, akasviba uye akaoma nzvimbo. Maonero edu ndechimwe chinhu chiri pakati. Isu tinofunga kuti firiji inoshanda zvakanyanya kuchengetedza mhodzi kuti dzigare kwenguva refu, asi izvo hazvireve kuti iyi ndiyo ...
Mbeu dzinokura munzvimbo dzinopisa
Kune avo vane rombo rakanaka rekugara padyo neEquator, iwe uchazoda kushandisa mbeu yembanje inobva kuMadya Pradish neTamil. Aya marudzi ekumaodzanyemba eIndia emuti wembanje anokura zvine simba uye anotumbuka zvakanyanya nekuda kwekupisa kwakanyanya uye kuoma kwezhizha reIndia ...
Mbeu dzekunze dzembanje nemamiriro ekunze
Pese pazvinokwanisika, iwe unoda kurega kushandisa zvinodhaka usati waedzwa nemushonga. Kana izvi zvisingaite, saka ungangoda dzimwe nzira dzekupasa bvunzo yemushonga. Mutemo wekutanga kunwa mvura yakawanda izvi zvinogona kukubatsira mune zvakawanda ...